परम्परागत हानिकारक मान्यताले : समाजमा पिडा भोग्दै महिलाहरु
सुर्खेत, २९ असोज । वीरेन्द्रनगरकी पुजा परियार एक किशोरी हुन् । उनको रजस्वला (महिनावारी) शुरु भैसकेको छ । उनी महिनावारी हुँदा उनलाई असह्य शारिरीक पिडा त छँदै छ समाज र परिवारको परम्परागत व्यवहारले झन् पिडा थप्ने गरेको छ । समाजमा रजस्वला हुँदा छुइ भएकि मान्ने र अछुत...
श्रीमान, श्रीमतिको हत्या, छोरा घाइते
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–७ बडाभैरव लाम्तडमा एक दम्पतीको हत्या भएको छ । ४० बर्षीय जयबहादुर सिंह र उनकी ३९ बर्षीया श्रीमती कमला सिंहको हत्या भएको हो । उनीहरुलाई सोही स्थानमा बस्ने खेमराज खड्का लगायतका ३÷४ जनाको समुहले हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय...
टेलिकमले सुरक्षामा ध्यान नदिँदा बिटिएस टावरहरुमा मनपरी
सुर्खेत, २८ असोज । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका २ (साविकको मजकोट गाविस वडा नं. ६) मा नेपाल टेलिकमको स्काई फोन सेवाका लागि टावर (बिटिएस) जडान गरिएको छ । २०६७ सालमा साविकको मजकोट गाविस र दूरसञ्चार प्राधिकरणसंगको समन्वयमा उक्त बिटिएस निर्माण गरिएको हो । टावर...
राती १२ बजेपछि सांसदहरुको पद सकिने, अाज बिशेष बैठक
सुर्खेत, २८ असोज । व्यवस्थापिका संसदका ५ सय ९२ सांसदहरुको समय अवधि आज राती १२ बजेबाट सकिने भएको छ । बिजनेसका हिसाबले संसदको शुक्रबार अन्तिम बैठक बसेपनि शनिबार विशेष बैठक राखिएको छ । शनिबार बैठकमा सांसदहरुलाई विधिवत बिदाई गरिनेछ । सभामुख ओनसरी घर्तीले...
शुरक्षा विना सुशासन असम्भव : प्रशासक
सुर्खेत, २८ असोज । मध्यपशिचमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्रप्रसाद गुरागाइँले शुरक्षा विना मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास असम्भव हुने बताएका छन् । यसको प्रत्याभूतिका लागि सक्षम कानूनी निकायसंगै कानूनको आवश्यकता पर्ने बताउँदै प्रशासक गुरागाइँले...
देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने क्षमता छ : राष्ट्रपति
सुर्खेत, २५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्णालीसँग देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने क्षमता रहेको बताएकि छन् । चन्दननाथ नमूना माध्यमिक विद्यालय जुम्ला खलंगाको नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवनको बुधबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कर्णाली...
थानीले तला थप्न सहयोग गर्ने
सुर्खेत, २१ असोज । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको भवनको तला थप्नका लागि पूर्व मन्त्री एवं सुर्खेत क्षेत्र नं. २ का सांसद हृदयराम थानीले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन् । शनिवार आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय...